विश्वकप २०१८ः किन अर्जेन्टिनाले ३ टन खानेकुरा बोकेर गयो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
विश्वकप २०१८ः किन अर्जेन्टिनाले ३ टन खानेकुरा बोकेर गयो ?
जेठ २९ गते, २०७५ - १२:५९
२१ औं संस्करणको विश्वकप ट्रफी उचाल्ने उद्धेश्यका साथ दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिना शनिबार रसिया पुगिसकेको छ । विश्वकप ट्र्फीको प्रबल दाबेदार अर्जेन्टिनी टोली रोलिङ स्टोनको तस्विरले सजाइएको बोइङ चढेर रुस ओर्लिएको हो ।
सो प्लेनमा खेलाडीसँगै ३ टन खानेकुरा तथा अर्जेटिनी खेलाडीका व्यक्तिगत भान्सेहरू पनि पुगेका खबर सार्वजनिक भएको छ ।
रसियाको समाचार संस्था तास न्यूज एजेन्सीले रसियाका लागि अर्जेन्टिनी राजदूत रिकार्डो लागोरियोलाई उदृत गर्दै समाचार लेखेको छ ।
उनीहरूले ल्याएको खानकुराको मात्राले अर्जेन्टिनी टोली विश्वकप ट्रफी उचाल्ने तयारीका साथ आएको संकेत गरेको छ । उनीहरूले ल्याएको खानेकुराको परिमाणले मानिसहरूका लागि अहिले चासोको विषय भएको छ ।
अर्जेन्टिनाले आफ्ना मूल्यवान खेलाडीले विदेशमा घरको खाना ‘मिस’ नगरून् भनेर प्रतियोगिता अवधिभरलाई चाहिने खानेकुरा बोकेर रसिया पुगेको बताइन्छ ।
अर्जेन्टिनी टोलीले रसियाको बोर्ननिस्टी शहरलाई आफ्नो आधार बनाएर बसेका छन्। यो मस्कोबाट २५ मीलको दुरीमा पर्छ ।
अर्जेन्टिनाले विश्वकपको यात्रा तय गर्न समूहमा आइसल्यान्ड, क्रोएशिया तथा नाइजेरियाको सामाना गर्नुपर्नेछ । धेरैले अर्जेन्टिनाले समूह चरण पार गर्ने विश्वास लिएका छन् । अर्जेन्टिनाले पहिलो खेल शनिबार आइसल्यान्डका विरूद्ध खेल्नेछ । एजेन्सी
जेठ २९ गते, २०७५ - १२:५९ मा प्रकाशित
यू–१९ क्रिकेट टोली घोषणा : कोको परे टोलीमा ?
च्यापियन्स लिगका अन्तिम आठ –को को सँग भिड्दै ?
च्याम्पियन्स लिगमा छानिएका ८ क्लब : को कस्ता ?
रोनाल्डोको ह्याट्रिक : प्रेमिकाले थाम्न सकिनन् आँशु
क्रिकेटमा राजनीतिः सैन्य टोपी लगाउने भारतीय क्रिकेट टोलीमाथि पाकिस्तानद्वारा कारबाही माग
विश्वकप फुटसल- नेपालको शुरुआती प्रतिद्वन्द्वी क्यानडा
चैत महीनाका लागि तय भएको नेपाल र मलेसियाबीचको मैत्रीपूर्ण खेल अचानक स्थगित
पिएसजी र रोमा बाहिरिदा युनाईटेड र पोर्टो सेमी फाइनलमा
नेमारले एमबाप्पेलाई ‘गोल्डेन ब्वाइ’ को उपमा प्रशंसा गर्दै यस्तो भबिष्यवाणी गरे
घरेलु मैदानमा रियल म्याड्रिडको लज्जाष्पद पराजय, च्याम्यिन्स लिगबाट आउट